Amanqaku kaRay Beharry malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu URay Beharry
Udale uphando olwenziweyo lwentengiso. Ngoku, uyakuhambisa njani uphando lwakho kwaye ufumane inani leempendulo ngokukhawuleza? I-10% ye-18.9 yeebhiliyoni zeedola zophando zentengiso zichithwe kuphando lwe-Intanethi e-US Ufumene ngaphezulu kwamaxesha amaninzi kunokuba uye kumatshini wekofu. Uyile imibuzo yophando, uyile yonke indibaniselwano yeempendulo- kwaye ugqibelele ngokulandelelana kwemibuzo. Emva koko uphonononge uphando, watshintsha